Dowladaha Jabuuti iyo Ethiopia oo iska kaashanaya amaanka – Radio Muqdisho
Dowladaha Jabuuti iyo Ethiopia oo iska kaashanaya amaanka
kulan looga hadlayay adkeynta amaanka wadamada Jabuuti iyo Ethiopia ayaa lagu qabtay magaalada Jabuuti.
kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda arimaha gudaha ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa ka qeybgalay wafdi uu hogaaminayay taliyaha guud ee booliiska federaalka Ethiopia, iyo wasiirka arrimaha gudaha dalka Jabuuti.
intii uu socday kulanka ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen adkeynta amaanka labada dal, la dagaalanka argagixisada, ka hortagga tahriibka iyo arrimo kale.
Labada dowladood ayaa ka wada hadlay sidii isha loogu heyn lahaa dhaq dhaqaaqyada argagixisada, socdaalka sharicdarrada ah iyo tahriibka.
Taliyayaasha booliiska labada dal ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo ku saabsan amaanka labada dal.
Ciidamada Xoogga Dalka Oo Goor Dhow La Wareegay Deegaanno Hoos yimaada Jalalaqsi